भुपेन्द्र बडुवाललाई कसरी, र किन मारियो ? को हुन् नबिन ? यो केसको खास नालीबेली यस्तो ? (भिडियो सहित) – Khabar Patrika Np
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १७, २०७८ समय: २२:४२:३३
कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–१ का भूपेन्द्र बडुवाल अमेरिका जाने तयारी गर्न केही वर्षअघि काठमाडौं पसे। अमेरिकी उच्च शिक्षाका लागि लिइने भाषा परीक्षाको पहिलो चरण पनि पार गरिसकेका थिए उनले। भाषा परीक्षामा उत्तिर्ण भएपछि अमेरिका जाने चाँजोपाँजो मिलाउँदै थिए उनी। बहिनीसँग काठमाडौं बसिरहेका बडुवाल दसैं मान्न घर फर्किए। संविधानसभा सदस्य तथा बडुवालका आफन्त भगत बडुवालका अनुसार लम्की बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक अध्ययन गरिरहेका भूपेन्द्रको अमेरिका जाने अन्तिम तयारी भइरहेको थियो।
अध्ययन लम्कीमा भए पनि अमेरिका जाने तयारीका साथ उनी काठमाडौं गएका थिए,’ बडुवालले भने, ‘भाषा परीक्षामा उत्तिर्ण भएपछि अमेरिका जाने सपना पूरा गर्न तयारीमा जुटेका थिए। तर मंगलबारको घ’टनाले भूपेन्द्रको सपना अधुरै रह्यो। उनका अनुसार चिसापानीका नविन रावलको समूहले उनको ज्यान लिए । ‘विभिन्न घ’टनामा सं’लग्न भएको पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सजाय नहुँदा रावल लगायतको मनोवल बढेको थियो,’ बडुवालले भने।
‘शाही थरका युवकलाई मा’‘र्ने योजनाबारे भूपेन्द्र जानकार थिएनन्’, बडुवालले भने,‘टीकापुरमा नवीनको गि’रोहका युवक जम्मा भएको देखेपछि भूपेन्द्रले सम्भावित ख’तरा आँकलन गर्दै भा’गेर उ’म्कन खोज्दा नवीनको गि’रोहले ह’ति’यार प्रयोग गरेर भूपेन्द्रको ह’‘त्या गरेको हो। विभिन्न घ’टनाका अभि’युक्त रावल र शाहीको स’मूहमा चिसापानी, लम्की र टीकापुरका करिव ५० जना आवद्ध रहेको स्थानीयले बताएका छन्। दुबै समूहले एकअर्कालाई भेट्नासाथ भौ’तिक आ’क्र’मण गर्ने गरेका थिए। शाही थरका युवकलाई भूपेन्द्रमार्फत बोलाउने र सक्ने गो;प्य योजना नवीन रावलले बनाएको बडुवालको भनाई छ।
इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरका प्र’हरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सापकोटाले बडुवालको ह’ ‘त्यामा प्र’योग भएको खु’कुरी ब’रामद गरिएको बताए। शाहीको ह‘त्या योजना बाहिरिने डरले ट्र’याप’मा पारेर ल’खेटी-ल’खेटी बडुवालको ह’‘त्या गरिएको हो। रावलका बुवा, आमा र भाइलाई भने प्र’हरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बडुवालको ह’त्यामा प्रयोग भएको ह’ति यार ब’रा’मद गरिएको छ। टीकापुरस्थित घटनास्थल नजिकै पे’ट्रोल पम्पको छेउमा ह’तियार ब’रा’मद गरिएको हो।
ह’‘त्यामा सं’ग्लन भएको आ’रोपमा प्र’हरीले ८ जनालाई प’क्राउ गरेको छ। यसअघि च’क्कु प्र’हा’रबाट ज्या’न गएको जानकारी आएको थियो,’ सापकोटाले भने, ‘तर घटनामा खु’कु’री प्रयोग भएको रहेछ। इलाका प्र’हरी कार्यालय टीकापुरका प्र’हरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सापकोटाले आ’रोपित नवीन भने फ’रार रहेको बताए। ‘नवीन यसअघि पनि विभिन्न घ’टनामा सं’ग्लन रहेको बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘बडुवालको ह’ ‘त्यामा पनि आ’रोपित छन्। उनको खोजी भइरहेको छ। घ’टनास्थल नजिकैबाट खु’कुरी ब’रा’मद भएको छ। पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।